Kumenyezelwa abawine i-A' Design Awards
Umklomelo we-A' Design wamazwe ngamazwe umemezele imiklamo engcono kakhulu yonyaka kuyo yonke imikhakha yedizayini.
I-A' Design Award (http://www.designaward.com), imiklomelo yedizayini yamazwe ngamazwe ebusa i-World Design Rankings, imemezele imiphumela yomncintiswano wayo wakamuva wokuklama.
I-A' Design Award imemezele izinkulungwane zemiklamo emihle, imikhiqizo eklanywe kahle, namaphrojekthi akhuthazayo njengabawinile. Imiklamo emisha emenyezelwe ewina imiklomelo ishicilelwa ku-inthanethi ohlwini lwabawinile lwe-A' Design Award.
Okufakiwe kwe-A' Design Award kwahlaziywa ngokucophelela yiphaneli yamajaji amakhulu anethonya emhlabeni wonke elihlanganise izifundiswa ezivelele, izintatheli ezinethonya, ochwepheshe abasunguliwe bokuklama nosomabhizinisi abanolwazi abavela kuwo wonke umhlaba.
Ijaji le-A' Design Award linikeze ukunaka okukhulu ekwethulweni nasemininingwaneni yephrojekthi ngayinye. Intshisekelo yomklomelo wokuklama ibisemhlabeni wonke, ngokuqokwa kuyo yonke imikhakha emikhulu yezimboni, nemingenelo evela emazweni amaningi.
Abashisekeli bedizayini enhle nezintatheli emhlabeni wonke bamenywa ngokufudumele ukuze zithole ugqozi lwedizayini entsha futhi zithole amathrendi akamuva kwezobuciko, izakhiwo, ukuklama nobuchwepheshe ngokuvakashela umbukiso owine Umklomelo we-A' Design. Izintatheli nabashisekeli bedizayini bazophinde bajabulele izinhlolokhono ezihlanganisa abaklami abawine imiklomelo.
Imiphumela yomncintiswano we-A' Design imenyezelwa minyaka yonke maphakathi no-April, kuqala kwabawine imiklomelo. Isimemezelo semiphumela yomphakathi siza kamuva maphakathi noMeyi.
Imikhiqizo, amaphrojekthi namasevisi ahamba phambili emhlabeni wonke abonisa idizayini ephakeme, ubuchwepheshe nokudala iklonyeliswa ngomklomelo we-A' Design. I-A' Design Award ifanekisela ukuvelela ekwakhiweni nasekusunguleni izinto ezintsha.
Kunamazinga amahlanu ahlukene okuhlukaniswa kwemiklomelo yokuklama:
I-Platinum: Isihloko se-Platinum A' Design Award sinikezwa amadizayini amahle kakhulu asezingeni lomhlaba abonisa izimfanelo zokuklama eziphakeme kakhulu.
Igolide: Isihloko seGolide A' Design Award sinikezwa imiklamo emihle kakhulu esezingeni lomhlaba ebonisa izimfanelo zedizayini eziphakeme kakhulu.
Isiliva: Isihloko seSilver A' Design Award sinikezwa amadizayini amahle kakhulu asezingeni lomhlaba abonisa ubuhle obuphezulu ekuklameni.
Ibhulonzi: Isihloko Somklomelo We-Bronze A' Design sinikezwa amadizayini amahle kakhulu abonisa ubuhle ekwakhiweni.
I-ayoni: Isihloko se-Iron A' Design Award sinikezwa amadizayini amahle abonisa ubuhle ekwakhiweni.
Abaklami, amaciko, abadwebi bezakhiwo, izitudiyo zokuklama, amahhovisi ezakhiwo, ama-ejensi obuciko, izinhlobo, izinkampani nezikhungo ezivela kuwo wonke amazwe zibizwa minyaka yonke ukuba zibambe iqhaza ekutuseni ngokuqoka imisebenzi yazo engcono kakhulu, amaphrojekthi kanye nemikhiqizo ezocatshangelwa.
Ama-A' Design Awards anikezwa ngezigaba ezibanzi kakhulu zemiqhudelwano, equkethe futhi izigaba eziningi.
Izigaba ze-A' Design Award zingahlanganiswa ngamaqoqo amahlanu:
Umklomelo Wedizayini Enhle Yendawo: Isigaba semiklomelo yedizayini yendawo sibona imiklamo emihle ekwakhiweni kwezakhiwo, idizayini yangaphakathi, idizayini yedolobha kanye nokwakheka kwezwe.
Umklomelo Womklamo Omuhle Wezimboni: Isigaba semiklomelo yedizayini yemboni sibona imiklamo emihle ekwakhiweni komkhiqizo, idizayini yefenisha, idizayini yokukhanyisa, idizayini yezinto zikagesi, idizayini yemoto, idizayini yokupakisha kanye nedizayini yemishini.
Umklomelo Wedizayini Enhle Yokuxhumana: Isigaba somklomelo wedizayini yokuxhumana sibona imiklamo emihle edizayini yezithombe, idizayini yokusebenzisana, idizayini yegeyimu, ubuciko bedijithali, umdwebo, ividiyo, ukukhangisa nedizayini yokumaketha.
Umklomelo Wedizayini Yemfashini Enhle: Isigaba semiklomelo yedizayini yemfashini ibona imiklamo emihle edizayini yobucwebe, idizayini yesisetshenziswa semfashini, izingubo zokugqoka, izicathulo nedizayini yezingubo.
Umklomelo Wokudizayina Kwesistimu Enhle: Isigaba somklomelo wedizayini yesistimu sibona imiklamo emihle ekwakhiweni kwesevisi, isu lokuklama, ukuklama kwamasu, ukwakheka kwemodeli yebhizinisi, ikhwalithi nokusungula izinto ezintsha.
Abaphumelele imiklomelo abafanelekile bayamenywa ukuba bahambele umcimbi wobukhazikhazi wobusuku nemiklomelo e-Italy, lapho bezobizwa khona esiteji ukugubha impumelelo yabo futhi baqoqe izindondo zabo, izitifiketi zemiklomelo nezincwadi zonyaka.
Imiklamo ezuze imiklomelo ikhonjiswa futhi embukisweni wedizayini wamazwe ngamazwe e-Italy. Abawinile abafanelekile be-A' Design Award banikezwa Umklomelo Wokuklama ongu-A' othandwayo.
Umklomelo we-A' Design uhlanganisa uchungechunge lobudlelwano bomphakathi, ukukhangisa nezinsizakalo zamalayisense ukusiza ukudala ukwazisa komhlaba wonke nokuqwashisa ngemiklamo emihle ewina imiklomelo.
Umklomelo we-A' Design uhlanganisa ukugunyazwa Kwelogo Yokuwina Umklomelo we-A' Design kubanqobi abafanelekayo ukuze babasize bahlukanise imikhiqizo yabo emihle yokuklama, amaphrojekthi namasevisi kweminye imikhiqizo, amaphrojekthi namasevisi emakethe.
Umklomelo we-A' Design uhlanganisa ubudlelwano bomphakathi bamazwe ngamazwe nezilimi eziningi, ukukhangisa nezinsizakalo zokuthuthukisa ukuze kusizwe amadizayini awine imiklomelo athole ukuchayeka emhlabeni wonke, ukumaketha nokubekwa kwemidiya.
I-A' Design Award umcimbi waminyaka yonke wokuklama. Okungenele kuhlelo olulandelayo lwe-A' Design Award kanye Nomncintiswano sekuvele kuvuliwe. Umklomelo we-A' Design wamukela okufakiwe okuvela kuwo wonke amazwe kuzo zonke izimboni. Abantu abanentshisekelo bayamukelekile ukuqoka imiklamo emihle yokucatshangelwa kwemiklomelo kuwebhusayithi ye-A' Design Award.
Uhlu lwamalungu amanje amajaji, indlela yokuhlola umklamo, umnqamulajuqu wokuklama wokuncintisana, amafomu okungenela umncintiswano wokuklama kanye nemihlahlandlela yokwethula imiklomelo yokuklama iyatholakala kuwebhusayithi ye-A' Design Award.
Mayelana nemiklomelo ye-A' Design
Umklomelo we-A' Design unomgomo we-philanthropic wokuthuthukisa umphakathi ngedizayini enhle. I-A' Design Award ihlose ukuqwashisa ngezinqubo nezimiso ezinhle zokuklama emhlabeni wonke, kanye nokuthungela nokuklomelisa ngobuhlakani, imibono yasekuqaleni kanye nokwakhiwa kwemiqondo kuyo yonke imikhakha yezimboni.
Umklomelo we-A' Design uhlose ukuqhubekisela phambili imingcele yesayensi, idizayini nobuchwepheshe ngokwakha izikhuthazo eziqinile zabadali, abasunguli abasunguli kanye nemikhiqizo emhlabeni wonke ukuze baqhamuke nemikhiqizo namaphrojekthi aphezulu azuzisa umphakathi.
I-A' Design Award ibheke ngabomvu ukuphromotha imikhiqizo namaphrojekthi asezingeni eliphakeme anikeza inani elingeziwe, usizo olungeziwe, ukusebenza okusha, ubuhle obuthuthukisiwe, ukusebenza kahle okukhethekile, ukusimama okungcono nokusebenza okuphezulu.
Umklomelo we-A' Design uhlose ukuba amandla ashukumisayo anamandla ekudaleni ikusasa elingcono elinomklamo omuhle, yingakho umklomelo we-A' Design ikakhulukazi uqukethe inani elikhulu lezinsizakalo zokukhuthaza imiklamo emihle eklonyelisiwe.
Bona abawine Imiklomelo ye-A' Design